सामाजिक संस्था ‘घर आँगन नेपाल’लाई सेवा विस्तारका लागि आर्थीक सहयोग (भिडियाे) :Nepali Website
सामाजिक संस्था ‘घर आँगन नेपाल’लाई सेवा विस्तारका लागि आर्थीक सहयोग (भिडियाे)
October 9, 2018 4:02 am Nepaliwebsite
काठमाडौं– वि.स. २०७०बाट सामाजिक कार्यमा आवद्ध संस्था ‘घर आँगन नेपाल’लाई डा भोला रिजाल सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्रदान भएको छ। सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच संस्थालाई आर्थिक रकम हस्तान्तरण गरिएको हो।
अनाथ, असक्त वालवालिका, उपचारबाट बञ्चित मानव तथा दुर्गममा सुत्केरी हुन नसकेर छट्पटाइरहेका महिलाहरुको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिरहेको संस्था हो ‘घर आँगन नेपाल’। सोही संस्थाले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि संस्थाको भावि योजना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त योजना अनुसार संस्थाले अबका दिनमा देशभर सुत्केरी हुन नसकेर छट्पटाइरहेका महिलाहरुको उद्धारको लक्ष लिएको छ।
यहीँ लक्षअनुरुप संस्थाको विकासकालागि फिल्म छक्का पञ्जा टिमले रु १ लाख ६ हजार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी डा भोला रिजालले रु ५१ हजार सहयोग प्रदान गरे भने पाथीभरा सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि संस्थाका तर्फबाट लायुर लामाले रु १ लाख ६ हजार रकम हस्तान्तरण गरे।
घर आँगन नेपालका प्रमुख अभियान कर्ता तथा समाजसेवी दिपक सिलवालले केही महिना अघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रसव बेदनामा छट्पटाइरहेका २ महिलाहरु लाई हेलिकप्टर मार्फत आकष्मिक उद्धार गरेका थिए। उक्त समय बच्चालाई जन्मदिन नसकेर पिडामा रहेकी सिन्धुपाल्चोक भारसिपाकी सन्तमाया तमाङ्ग र सोही स्थानकी सिता जोगीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराएका थिए। दिपकको उक्त कार्यमा डा. भोलारिजालले प्रत्यक्ष साथ दिइरहेका छन्।
संस्थाका सञ्चालक दिपकले उक्त महिलाहरूकाे उद्धर र सफलता पछि भने दिपकले देशभरी सेवा विस्तारमा आफु लागि पर्ने बताउदै आएका छन्। उनको यस शुभ कार्यलाई डा भोला रिजार, पूर्व सेनापति रुकमांगत कटुवाल, सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई र अन्य संघ संस्थाले साथ दिइरहेका छन्। संस्थाको यस अभियानलाई सिम्रिक एयरले साथ दिने भएको छ। संस्थाका प्रमुख सिलवालका अनुसार १ बर्ष लामो संर्घष पछि अभियानका लागि सिम्रिक एयर सहयोगका लागि तयार भएको हो।
अबका दिनमा सुत्केरी हुन नसकेर छट्पटाइरहेका महिलाहरुको उद्धारका लागि पुर्वमा लुक्ला , पश्चिममा पोखरा र मध्यमा काठमान्डौमा रहेका हेलिकप्टरहरुले सहुलियत दरमा सेवा प्रवाह गर्ने छन्। यसैगरि मेडिकल क्षेत्रमा डा. भोला रिजालले साथ दिने बताएका छन्। उनले कार्यक्रमा बोल्दै भने,‘दिपक जी र उहाँको सस्थालाई सहयोग गर्न पाँएदा धेरै खुसी लागेको छ। र भविष्यमा मैले सकेको सहयोग संस्थाका लागि निरन्तर रहने छ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा पूर्व सेनापति रुकमांगत कटुवालले पनि भविष्यमा आफुँले सकेको नैतिक तथा आर्थीक सबै किसिमको सहयोग गर्ने बताए। यता संस्थाका संस्थापक दिपक सिलवाल भने आजै बाट आफ्नो लक्ष प्राप्ती र संस्थाको भविष्यका लागि भन्दै आज आसोज २२ बाट २८ गते सम्म पशुपति क्षेत्रमा ब्रत बसेका छन्।
उनले भने,‘हाम्रो सानो प्रयासले महिला दिदि बहिनीहरुको ज्यान बच्न सक्छ र नयाँ पुस्ताले नयाँ जीवन पाउन सक्छन् भने त्यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु।’